Wiil Soomaali ah oo halis galay kadib markii uu ku dhuuntay lugaha diyaarad socotay 5 saacadood – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Honolulu – Mareeg.com: Wiil yar oo 16 jir ah ayaa si la yaab leh uga badbaaday geeri, kadib markii uu ku dhuuntay halka diyaaraddu lugaha ku laabato marka ay duusho.
Arrinta la yaabka dheeradka ah leh ayaa noqotay in wilkaan oo labadii maalmood ee lasoo dhaafay warbaahinta caalamku hadal heysay uu noqday Soomaali ku noolaa dalka Mareykanka, waxaana wilkaan la dhigay Isbitaal.
Diyaaradda wiilkan yar ku dhuuntay ayaa ka baxday gobolka California ee dalka Mareykanka, waxeyna kusii jeeday Jazeeradda Hawaii ee isla dalkaas, waxaana diyaaraddaas duuleysay in ka badan 5 saacadood.
Shirkadda diyaaradaha Hawaii ayaa sheegtay in shaqaalaha shirkadaas inanka oo aan weli magaciisa la sheegin ka heleen kadib markii diyaaraddu ku degtay garoonka diyaaradaha Maui ee Hawaii kadib markii ay kazoo duushay garoonka diyaaradaha San Jose ee gobolka California.
Wiilkaan ayaan kazoo booday diyaaradda kadib markii caga dhigatay, wuxuuna sheegay inuu miirdaboomay, hase ahaatee uu soo miiraabay kadib markii diyaaraddu degtay.
Shirkadda ayaa isla markii laamaha amaanka ku wargeliyey xaaladda wiilkaan yar ee sida laa yaabka leh ugu safray halka diyaaraddu luga ku laabato marka ay duuleyso, halkaasoo aan laheyn wax hawo ah.
FBI Mareykanka ayaa sheegtay in willkaan uu oo qoyskiisa ka cararay uu naftiisa halis geliyey, hase ahaatee uu badbaaday, waxaana wareysi la yeelanaya hay’adaha amaanka.
Wiilkaan oo markii dambe la ogaaday inuu yahay Soomaaliya ayaa laamaha amaanka Mareykanka u sheegay inuu doonayey inuu u tago hooyadiis oo ku sugan Soomaaliya.
Tan iyo sanadkii 1947, waxaa sidaan oo kale ku dhuuntay halka diyaaraduu luga ku laabato ilaa 105 qof, waxaana badbaaday 25 ka mid ah, halka inta kale ay dhinteen.